11 voa maina, mitombo hafa tanteraka
Ny sakafo ho an'ny olona dia tena ilaina, kanefa vitsy dia vitsy no mieritreritra ny fivoaran'izy ireo sy ny endrik'izy ireo alohan'ny nahatongavany teo amin'ny latabatra.
Ny hazo fihinam-bidy ihany no maniry? Na ahoana na ahoana!
Ny peanuts dia malaza any amin'ny firenena maro, fa ny ankamaroany indrindra any Etazonia dia misy kolontsaina iray manontolo natokana ho an'io voanjo io, indrindra ny menaka manitra, tsy misy izay tsy mahita ny sakafo maraina amerikana. Io tongolobe io dia mitombo ao anaty tany toy ny ovy, noho izany dia fakany fototra, fa tsy kitapo, no mety amin'ny sakafo.
2. Nôvambra breziliana.
Tena mahaliana ny nut nutrition breziliana - amin'ny voankazo iray lehibe dia betsaka ny voanjo. Nentina tao anaty voankazo ireo akondro ary nihinana voanio, ary ny sasany tamin'izy ireo dia nalevina teo amin'ny tany, ary ny sasany amin'izy ireo dia nitombo. Ny hazo ao Brazila dia afaka miaina mandritra ny 500 hatramin'ny taona 1000 ary tonga amin'ny haben'ny habeny.
Ny tantaram-pirahalahiana rehetra an'ny tsirairay. Vita amin'ny vitamina sy voly fotsiny izy io. Izy io dia mihinana na misakafo na salady. Ny tongony dia mitombo toy ny hazo misy ravina boribory. Manana rafitra fototra matanjaka izy, noho izany dia tsy ilaina ny mamboly hazo manakaiky ny trano, satria afaka mamotika ny fototra amin'ny farany.
Ny chestnut dia tena mahafinaritra ary mamelana ravina mahaliana, noho izany, any amin'ny firenena Sovietika dia matetika izy no mamboly amin'ny alàlan'ny hatsarana. Tsy ny kitay rehetra no ampiasaina ho sakafo, any amin'ny faritra misy anay, ny karana misy voamaina dia mahalana vao afaka mifanena. Talohan'io, io mavo io dia nanolo ny olona ovy. Ary androany dia sakafo matsiro ary ankasitrahana indrindra, indrindra fa amin'ny truffles, indrindra ny voankazo lehibe.
5. Pine nut.
Ny voanjo cedar ao Rosia dia mety ho sakafom-bary avy any Siberia, izay afaka mitombo hatramin'ny telo arivo taona. Ny karazana sisa tavela amin'ny hazo kesika dia tsy manome sakafo ho an'ny olombelona. Ny voanio cedar dia tena avo lenta amin'ny kalôria, manankarena ny tavy sy ny voamadinika, na dia kely aza. Mihamamiratra kokoa noho ny tsirony, raha sasao kely ny voany mandra-pifidy solika avy amin'izy ireo.
Ny cashew avy any Homeland dia i Brezila. Mahaliana izy ireo noho ny endriny tsy mahazatra sy ny tsiro, indrindra fa tsara ny mihinana salohy kely ary mafana. Ny voankazo cashew dia toy ny paoma, tena mamy sy matsiro, ary ny vozony dia miforona ivelan'io voankazo io. Tsy mahatratra antsika ny voankazo, satria manimba ny andro aorian'ny fanesorana azy amin'ny sampana. Saingy tia ny firenentsika ny voanjo.
Amin'ny voaniho dia mahafantatra ny zava-drehetra ny rehetra, saingy tsy ny rehetra no mahafantatra fa tena nut ity. Ny ampahany ivelany amin'ny voaniho dia tsy mety amin'ny sakafo, fa ny voan-java-manitra, na ny rononony sy ny ao anaty fotsy anatiny, dia tena mampiasa ny fangatahana kiziniana. Misy palmie kokôlôdia any amin'ny tany mafana ao amin'ny ranomasina.
Ny ambioka dia mangidy sady mangidy. Ny fitaovana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana dia mampiasa almandy mamy ihany. Tsy hoe tena hafahafa io vozona io, araka ny eritreritry ny maro. Ny toetr'andro dia mitombo ao Krimea sy any amin'ny faritra atsimon'ny faritra Sovietika, ary koa any Asia sy Caucasus. Ity nut dia tena mahaliana sy mahavariana mahazatra ho an'ny maro, mahafinaritra ny mihinana na amin'ny endrika mangahazo na amin'ny sakafo gulinary. Noho ny tsirony mahavoky azy, ny alikaola dia nampiana fanampiana fanampiny ho an'ny fisotroana zava-pisotro misy alika sasany.
Pecan dia havana akaikin'ny renirano, noho izany dia toa tahaka ny tsiro izy ireo, fa ny pecan kosa dia mazavaratsy sy mangarahara kokoa. Avo be ny kaloria: misy voankazo 850 eo ho eo ny voany. Mety hahatratra metatra 40 metatra ny pecan ary hamoa 300 taona. Ny tanindrazan'ilay vozona dia Amerika Avaratra.
Ny tanindrazan'ny pistazios dia Iran sy Irak, izay misy ireo voanjo ireo. Pistachio dia kely ary manana satroboninahitra ambany, tsy mitovy amin'ny solontenan'ny hafa, ary manana karazany 20 ihany koa. Milefitra tsara ny hafanana sy ny hatsiaka hatramin'ny 25 degre.
Ny hazan-dranomasina dia karazana hazelà voajanahary. Mitombo izy io amin'ny endriky ny kirihitra sy ny diamondra izay mety hahatratra 3 metatra. Ny voankazo sy ny ravin'io karazana karazana karazan-kazo io dia lehibe kokoa noho ireo hazo mpiompy.
10 amin'ireo voankazo faran'izay tsara tarehy izay tsy dia henonao loatra
Maivamaivoho valo amin'ny valo taona, satria hitanao fa ho tia anao amin'ity taona ity mandrakizay ianao!
Sakafo 20 avy amin'ny McDonald's manerana izao tontolo izao, izay tsy nampoizintsika taminy
Ny voankazo sy ny voankazo izay omen'ny mpahay siansa ny mihinana amin'ny taolana
Izao no mitranga rehefa misy cookie makany iray nalaina tamin'ny mpamorona iray
20 zavatra mahaliana momba ny tsiranoka tianao indrindra, izay mety ho gaga anao
Fihetseham-po 22 mahavariana momba ny fisotroana be indrindra indrindra eran'izao tontolo izao
Vehivavy amam-bidy 2016
Venus Williams dia mifandray amin'ny sipa-millionaire
Fanosotra ny voan'ny dipoavatra alohan'ny nambolena - ahoana ny fomba hanomanana tsara ny voany?
Patties amin'ny alokaloka sy ny atody
Karazana fohy - inona moa izy ireo ary iza no mety aminy?
Toeram-pandaharam-bary ho an'ny trano fonenana
Mpandrindra fohy amin'ny tendonin'ny tiroida - soritr'aretina
Ahoana ny fomba hanoroana olona?
Asidra asidra avy amin'ny haavony ao anaty kitapo
Feng Shui efitrano fatoriana, fitsipika fandaminana sy fanokanana ho an'ny fialan-tsasatra ara-pahasalamana
Inona no tadiavin'ireo tovovavy?
Ahoana ny fomba hikarakarana tsara ny fandriam-bady - toro-hevitra ho an'ny mpikarakara tokantrano
Ahoana ny fomba hanononana ny kisary mainty amin'ny tovolahy iray?
Sakamalao vita amin'ny akora